Ukunakekelwa okufanele yucca ekhaya: ukuchelela, ukufakelwa, umanyolo.
Amanye amathiphu okunakekela kahle i-yucca ekhaya.
Phakathi kwesisindo sezitshalo ezithandwayo, i-yucca iphuma ngokufana kwayo nesundu somuthi. Ngesizo sakhe, ungakha ama-tropiki amancane ngakwesokudla ekamelweni lokuhlala endlini yakho. Yiqiniso, emthini wesundu kuzobukeka "njengomdala", futhi ngaphambi kwalokho uzoba nezinkathazo eziningi eziphathelene nokumnakekela. Ukutshela ngezinto eziyisisekelo ozidingayo, uma unquma ukuhlala endlini yakho i-yucca enhle.
Ngendlela, cishe uzoba nesithakazelo sokwazi ukuthi yini ngempela kule ndawo isitshalo sokuqala se-denim emhlabeni. Lesi isitshalo esinamandla esihlala ngokuthula ngehora ebusika ezintabeni zaseCaucasus naseCrimea. Kodwa ukuze kuzalwe ekhaya kuyadingeka ukwenza umzamo othile.
Ukunakekelwa kahle kwe-yucca
Ngaphambi kokuthenga i-yucca kubalulekile ukucabangela ukuthi kudinga isimo sezulu esikhethekile ekamelweni. Kuzodingeka unikeze umswakama ophansi endlini kanye nesamba esikhulu sokukhanya. Kungcono ukubeka imbiza yalesi sitshalo ngakwesokunxele kwendlu, futhi uma kungekho ukukhanya okwanele kusuka emafasiteleni, kuzodingeka uthole isibani esikhulu sophothorescent.
Ehlobo, zama ukuthatha i-yucca emoyeni omusha kaningi. Ngenxa yalokhu, ibhaluni liphelele, ikakhulukazi uma ligcwele ukukhanya kwelanga emini.
Nakani ebhodweni. I-Yucca idinga isikhala, ngakho khetha imbiza ejulile bese uyigcwalisa nge-substrate evaliwe. Ukuze ungaphutha, thintana nomxhumanisi esitolo sokuthenga imbali noma uthenge i-substrate ngokuqondile yucca (lokhu kubhaliwe ephakheji).
Ungaphili amanzi ngalesi sitshalo, ukhetha isomiso kunomhlabathi othungayo. Uma kunamanzi amaningi, awukwazi ukulindela impilo yakhe ende. Kungenzeka ukuthi impande izobola futhi isitshalo sizofa. Kwanele ukunciphisa ukuchelela okunye njalo ezinsukwini eziyishumi.
Ngezinye izikhathi, hlambulula amaqabunga ngendwangu ebomvu, futhi ebusika ungawafuthisa kancane ngamanzi, kodwa kuphela uma indlu yakho ishisa kakhulu.
Ungakhohlwa ukondla lesi sitshalo kabili ngonyaka ngama-fertilizer eziyinkimbinkimbi. Ngakho-ke, uzokwazi ukumnikeza ukudla okwanele. I-Yucca izokwazisa futhi ngokuqinisekile izojabulisa ngombala omuhle, ocebile womqhele. Kodwa khumbula ukuthi akufanele ukhiqize ngokushesha emva kokufakelwa. Futhi, gwema lokhu ngesikhathi sesifo sesitshalo.
Imithetho Yokwenyuka Yucca
I-Yucca ayidingi ukufakelwa kwezitshalo njalo, kwanele ukuyenza kanye njalo eminyakeni emibili. Isikhathi esiphelele sonyaka salokhu ukuphela kwentwasahlobo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthola ibhodlela elisha lesayizi elincane kakhulu futhi ligciniwe phansi. Kuhle kakhulu ukuthi ukufakelwa kabusha kungumhlabathi owodwa wobumba.
Ukutshala isitshalo kusukela ebhodweni ukuya ebhodweni kubalulekile ukugcina i-clod yomhlaba eyakhiwe ezimpandeni. Ngakho-ke awubalimazi futhi uwadlulisele endaweni ephephile. Isikhathi kuphela lapho impande kufanele ibe ngokucophelela, ihlanzeke ngokuphelele inhlabathi endala - uma iqala ukubola. Lesi simo esinzima, kodwa singalungiswa. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuhlanza umhlaba omdala bese ususa izingxenye ezimele ngommese. Sicela uqaphele ukuthi kufanele kube bukhali kakhulu. Uma nje usika impande, qinisekisa ukuthi ufafaza ukusika ngamalahle.
I-Yucca isitshalo esihle kakhulu futhi akunzima ukuyikhula ekhaya. Into eyinhloko okufanele uyikhumbule mayelana nezici zayo futhi uyinakekele kahle. Uma isiqhakaze, siyakuhalalisela! Ungabizwa ngokuthi uchwepheshe we-floriculturist!
Izitshalo zekhofi zasendlini
Ukunakekela izimbali zendlu: i-cycad
Izitshalo zangaphandle: ukuhlaselwa komuntu
Ukunakekela izindlu zendlu: bokarneya
I-Nasturtium iyihlobiso yangempela engadini
Izinkinga zabesifazane ezingu-7 ngocansi
I-Herpes, noma "ebandayo" ejwayelekile ezindebeni
Imidlalo yokudlala indima: ukuhlukanisa impilo yakho yobulili!
Indlela yokwenza izingubo ezinhle ezinamakhadi amaningi ebusika: imithetho emithathu ebalulekile!
Kuyini ukugeza okuwusizo noma i-sauna?
I-cocoa ne-Hercules nama-spice
Indlela yokubuyisela isifiso socansi
Ikhekhe lokugcwalisa ikhekhe
Isikhumba ebusweni nokukhwabanisa
Ikhekhe le-Easter - iresiphi elula yabaqalayo ngaphandle kwemvubelo nezinsini
Ukuxhumana kwi-intanethi, ubudlelwano obubonakalayo
Anti-cellulite uju massage ekhaya